कोलोराडो WIC | जेपीएमए, इंक
स्वचालित फोन लाइनमा कल गर्नुहोस् 1-844-234-4950 यदि ...
तपाइँ रिसेट वा आफ्नो PIN परिवर्तन गर्न आवश्यक छ।
मेरो कार्ड गुमाएको छ वा चोरी भएमा के गर्नु पर्छ?
आफ्नो पिन पहिला परिवर्तन गर्नुहोस्, र त्यसपछि तपाईंको स्थानीय WIC कार्यक्रमलाई अहिले कल गर्नुहोस्! तिनीहरूले तपाईंको खाद्य फायदाहरू प्रयोग गरेर तपाईंलाई नयाँ कार्ड प्राप्त गर्नबाट रोक्न सक्दछ।
तपाईंको कार्ड वा तपाईंको स्थानीय WIC कार्यक्रमको पछाडि टोल फ्री नम्बरलाई कल गर्नुहोस्।
WIC कार्यालयमा भरी हालका फूड फाइदाहरू तुरुन्तै उपलब्ध हुनेछन्। आगामी महिनाको लागि खाद्य फायदाहरू प्रारम्भिक मितिमा आधी रातमा तपाईंको ईडब्ल्यूआईसी कार्डमा जम्मा गरिनेछ र अन्त्य मितिको म्याद सकिन्छ।
तपाईंको ईश्वरीय कार्ड सुरक्षित गर्नुहोस्! जब तपाइँका सबै WIC फूडहरू खरिद गरिएका छन्, तपाईंको कार्ड पुन: प्रयोग योग्य छ। तपाईंको फाइदाको अर्को सेट उही eWIC कार्डसँग खरिद गरिनेछ।
के हुन्छ यदि म आफ्नै आफ्नै किनमेल गर्न सक्दिन र मेरो लागि पसल गर्न कसैलाई चाहिन्छ?
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ तपाईंसँग अरूको पसल हुन सक्नुहुनेछ। तपाईले आफ्नो ईईआईसीआईसी कार्ड र पिन दिन सक्नुहुन्छ। बस सुनिश्चित गर्नुहोस् कि यो तपाईलाई भरोसा छ!
के हुन्छ यदि सबै WIC फूडहरू खरिद गरिएन भने? के यी फाइदाहरू अर्को महिनामा रोलिन्छ?
होइन, प्रयोग हुने फायदाहरू समाप्त मितिमा म्याद समाप्त हुनेछैन।
कोलोराडो WIC भोजन सूची अंग्रेजी वा स्पेनिशमा हेर्नको लागि तल क्लिक गर्नुहोस्।
कहाँ Enfamil किन्नुहोस्
तपाईंको ब्यालेन्स जाँच गर्दै
तपाईं आफ्नो खाता ब्यालेन्स धेरै तरिकाहरू जाँच गर्न सक्नुहुन्छ:
WICShopper अनुप्रयोगमा "मेरा लाभहरू" विकल्प प्रयोग गर्नुहोस् तपाईका हालका सुविधाहरू हेर्नका लागि।
तपाईंको अन्तिम भण्डार रसीद जाँच गर्नुहोस्।
एउटा किराना स्टोर क्यासियर हेर्नुहोस् वा तपाईंको हालको ब्यालेन्सको प्रिन्ट आउटको लागि ग्राहक सेवा डेस्कमा जानुहोस्।
ब्यालेन्स जाँचको लागि तपाईंको eWIC कार्डको पछाडि टोल फ्री नम्बर कल गर्नुहोस्।
अनुरोध www.ebtedge.com तपाईंको ब्यालेन्स हेर्न र प्रिन्ट गर्न।
कुनै पनि भुक्तानीको अर्को फाराम अघि तपाईंको ईडब्ल्यूआईसी कार्ड स्वाइप गर्नुहोस्।
कुनै पनि बाँकी शेष रकम नगद, EBT, SNAP वा स्टोर द्वारा स्वीकार गरिएको भुक्तानीको अन्य रूपको साथ भुक्तानी गर्न सकिन्छ।
तपाईंको अनलाइन खातामा जानुहोस् www.ebtedge.com.
तपाईंको पिन अनुमान लगाउन प्रयास नगर्नुहोस्। यदि सही PIN चौथो प्रयासमा प्रविष्टि गरिएको छैन भने, तपाइँको पिन लक हुनेछ। यो कसैले तपाईंको पिन अनुमान लगाएको छ र तपाईंको फायदा प्राप्त गरी सुरक्षाको रूपमा गरिन्छ। अनलक गर्न तपाईंको कार्ड अन्धा सम्म पर्खनुहोस् र तपाइँको खाता स्वतः अनलक हुनेछ।
संघीय नागरिक अधिकार कानून र अमेरिकी कृषि विभाग (युएसडीए) नागरिक अधिकार कानून र नीतिहरूको आधारमा, युएसडीए, यसको एजेन्सीहरू, कार्यालयहरू, र कर्मचारीहरू, र यूएसडीए कार्यक्रममा भाग लिने वा प्रशासित गर्ने संस्थाहरूलाई जाति, र ,को आधारमा भेदभाव गर्नबाट प्रतिबन्धित गरिएको छ। राष्ट्रिय उत्पत्ति, लि dis्ग, अशक्तता, उमेर, वा कुनै पनि कार्यक्रम वा यूएसडीए द्वारा अनुदान प्राप्त गरेको गतिविधिमा पूर्व नागरिक अधिकार गतिविधिको लागि बदला वा बदला।
अक्षम व्यक्तिहरू जसले प्रोग्राम जानकारीको लागि संचारको वैकल्पिक माध्यमको आवश्यकता पर्दछ (जस्तै ब्रेल, ठूलो प्रिन्ट, अडियोटेप, अमेरिकन साइन भाषा, आदि), एजेन्सीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् (राज्य वा स्थानीय) जहाँ उनीहरूले फाइदाहरूको लागि आवेदन गरे। बहिनीहरू, कडा मेहनत वा भाषण असक्षम छन् व्यक्तिहरूले USDA मा फेडरल रिले सेवा (800) 877-8339 मार्फत सम्पर्क गर्न सक्छन्। थप रूपमा, कार्यक्रम जानकारी अंग्रेजी भन्दा अन्य भाषाहरूमा उपलब्ध हुन सक्छ।
भेदभावको एक प्रोग्राम उजुरी दायर गर्नको लागि, युएसडीए प्रोग्राम भेदभाव उजूरी फाराम पूरा गर्नुहोस्, (AD-3027) अनलाइन फेला पर्‍यो: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, र कुनै पनि यूएसडीए अफिसमा, वा लेख्नुहोस् पत्र यूएसडीएलाई सम्बोधन गरिएको थियो र फारममा अनुरोध गरिएको सबै जानकारी पत्रमा प्रदान गर्दछ। उजूरी फारमको प्रतिलिपि अनुरोध गर्न, कल गर्नुहोस् (866) 632-9992। तपाईंको पूरा फारम वा पत्र यूएसडीएलाई बुझाउनुहोस्:
(1) मेल: कृषि कृषि विभाग
(2) फ्याक्स: (202) 690-7442; वा
(3) ईमेल: program.intake@usda.gov.